"Jehovah … avy hitsara ny tany ...; hitsara izao rehetra izao amin’ny fahamarinana Izy ary ny firenena amin’ny fahitsiana. Salamo 98:9 Mijere Ahy, dia ho voavonjy ianareo, ry vazan-tany rehetra! Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa." Isaia 45:22
Ny haino aman-jery dia tsy mitsahatra mampita amintsika ireo vaovao mitranga momba ny fahasahiranana ara-toekarena, ara-bola na ara-tontolo iainana. Ampahatsahiviny koa fa mety hisy ny loza mahatsiravina ara-boajanahary, valan’aretina, mosary, horohoron-tany… Fa ao ambadik’ireny korontana mampihovitrovitra ny zanak’olombelona ireny, dia misy iray tsy dia resahina firy ary sarotra hita kokoa.
Io dia ny fahasimbana ara-toe-panahy, vokatry ny fandavan’ny olona tsy hihaino an’Andriamanitra. Marina fa manana akony hafa tanteraka noho ny fitotonganan’ny sandam-bola izany, saingy io fandavana io dia miteraka fanamelohana mandrakizay, ho an’ireo izay tsy mihaino Ilay Andriamanitra naneho ny tenany tao amin’i Jesosy Kristy.
Fa ny kristiana kosa dia nahazo izany fanambarana izany avy tamin’ny Baiboly. Mampitandrina ny Baiboly fa indray andro any, rehefa hivaha tanteraka ny fahasahiranan-dRaolombelona, dia hisy tribonaly tokana sy miezinezina: hotsarain’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy ny olona (Romana 2:16). Androany Andriamanitra dia te hampahafantatra ny fahasoavany amin’ny olona rehetra. Alohan’ireo fitsarana mampivarahontsana ireo, dia antsoin’Andriamanitra ny tsirairay hamitram-pihavanana aminy. Izy no Andriamanitra fahamarinana, kanefa koa Andriamanitra fitiavana (1 Jaona 4:16). Andriamanitra dia “tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin’ny fahalalana ny marina” (1 Timoty 2:4).
Ny Baiboly dia voasoratra sy voatahiry nandritra ny taonjato maro ho an’ny olona rehetra, ary ankehitriny izy dia hita saika manerana izao tontolo izao. Hafatra azo antoka no entiny. Hazavainy tsotra amintsika ny fomba ahazoana miala amin’ny fanamelohana, ny fomba hitoerana mandrakizay ao amin’ny fankasitrahan’Andriamanitra.